Ongorora: Ubuntu Mate Beta 2, desktop ye nostalgic vanhu | Kubva kuLinux
Ongorora: Ubuntu Mate Beta 2, desktop ye nostalgic vanhu
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Kugoverwa
Chinyorwa ichi chakanyorwa na Percaff_TI99 uye yakatorwa zvachose kubva GUTL Portal uye yakangogadziriswa diki mune yayo shanduro
Nyika iri kuenderera mberi uye iine matekinoroji matsva. GNU / Linux haina kusunungurwa pazviri, zvinozivikanwa kuti kambani iyi Canonicall (Ubuntu), sevagadziri ve Gnome, Vakafunga kuita shanduko vakananga kune idzo dzinodaidzwa nevazhinji kuti desktop nyowani paradigm.
Kukwira kwemidziyo yemafoni uye mapiritsi kwakakurudzira kuvandudzwa kwe Gnome goko (GTK3) uye Ubuntu Unity kuitira kusimudzira kuenderana uye kugadzirwa kweiyi fambiro mberi. Desktop yekuvandudza inoregeredzwa Gnome zvetsika (GTK2), Chinhu chaive chakakosha kana iwe waida kukwikwidza mumusika wanhasi.
Iyi sarudzo yaive yekufambira mberi kukuru kwetekinoroji kune vashandisi vazhinji, vamwe (kusanganisira vanogadzira) vakaita kuti kusahadzika kwavo kunzwike nezve ruzivo rwe desktop. Kune vamwewo vanofunga izvozvo Ubuntu 10.04 Lucid Lynx ndiyo yaive yakanakisa vhezheni ye Ubuntu, uye maonero angu haana kusiyana zvachose.
Muchirevo chechinyorwa hana yakabatana yaikosha kwazvo; uye zvichibva pane izvi, mugadziri akafunga kuchengetedza desktop kuti irarame Gnome yechinyakare kugadzira chirongwa MATE.
Parizvino maraibhurari edesktop MATE (MDE) ari muzvivakwa zvemugovano unozivikanwa. Uku kwave kukurudzira kukuru kuProjekti MATE, Clement akasara (Linux Mint) aive wekutanga kupa rutsigiro rwake.
Kugovera kunotsigira MATE:
Unofficial repositories (zvakarongwa kuti zviiswe mumahofisi ezvinyorwa).
Mune masystem *BSD:
Nekudaro kugovera kwaive kusipo uye pamwe kwaitarisirwa nevazhinji vashandisi ve Ubuntu izvo zvichiri kuchengetedza zvavanofarira kudesktop Gnome zvetsika ndizvo Ubuntu MATE.
Zvinoenderana neyepamutemo saiti:
Ubuntu MATE Iyo yakagadzikana, iri nyore-kushandisa-inoshanda sisitimu ine inogadziriswa desktop desktop. Yakanaka kune avo vanoda iwo ekumusoro mashandiro ematafura avo, malaptop uye netbook uye vanofarira echinyakare desktop desktop fananidzo. Neine mwero Hardware zvinodikanwa zvinokodzera zvivakwa zvemazuva ano uye zvekare zvigadzirwa zvakafanana.
Mukuwedzera Ubuntu MATE inoisa nhevedzano yezvinangwa uye zvinangwa:
Inowanikwa nemunhu wese, zvisinei nemutauro uye kugona kwemuviri.
Wedzera kugamuchirwa kwemushandisi mu Ubuntu uye tafura MATE.
Ubuntu seimwe nzira yemakomputa asina simba rakaringana kumhanyisa desktop desktop.
Kutanga kusarudza chikuva Ubuntu mhinduro dziri kure dzekushandira dzakadai LTSP
Dzorera mazuva anofadza e Ubuntu kusati kwatanga kubatana
Shandisa madingindira uye mifananidzo yakafanana ne Ubuntu saka icho Ubuntu MATE ziva pakarepo.
Kana zvichikwanisika kupa kune Debian saka nzanga ye Debian y Ubuntu vanobatsirwa.
Sarudzo yemapakeji ayo anofarira mashandiro uye kugadzikana kwekureruka uye kufungidzira.
Ipa nzvimbo yevashandisi ve Linux vanosarudza chinyakare desktop desktop fananidzo.
Iyo inogamuchirwa seyemutemo "kuravira" kwe Ubuntu.
2 Ubuntu Mate chitarisiko
3 Ubuntu Mate Zvishandiso
4 Ubuntu Mate maficha
5 Minimum Hardware Zvinodikanwa zveUbuntu Mate
6 Yakakurudzirwa Hardware Zvinodiwa
Mufananidzo ubuntu-mate-14.10-beta2-desktop-i386.iso Ndakaitora kubva kune yepamutemo saiti ye Ubuntu MATE. Kuiswa kwacho kwakaitwa mu Virtualbox kwandakapa 900 MB ye RAM uye 8 GB yediski nzvimbo.
Iyo wizard inotitungamira kuburikidza neese maitiro ekumisikidza, sekunge nekuwanda kwekugovera kunoenderana Ubuntu. Mushandisi haazove nematambudziko mune izvi; zvisinei, iwe unogona kubhodhi midhiya mhenyu pasina kuisa iyo system
Zvinodikanwa 6,3 GB ye diski nzvimbo
Yekuisa Rudzi (shandisa yakazara diski, encrypt partition, shandisa LVM)
Kugadziridza: Mushandisi uye Mapasipoti
Login inotarisirwa ne ChiedzaDM. Seimwe yekuwedzera ficha iyo inotipa isu kuti titange musangano wevaenzi, iyi sarudzo haina kukwezva kwandiri zvakanyanya kunyangwe hazvo data rese rakachengetwa nemuenzi rakabviswa kana uchibuda kunze. Iyo poindi ndeyekuti chero munhu achave nekwaniso kune yangu sisitimu pasina kushandisa password, ipfungwa chaiyo yemunhu.
Virtualbox Izvo hazvina kudzora chidzitiro otomatiki sezvazvinoitika pamwe nekuparadzirwa kwakawanda, asi zvinogadziriswa zviri nyore nekutsvaga kune iyo VirtualBox menyu: Midziyo »Isa CD mufananidzo we«GuessAdditions»Kana nekutsikirira Host + D. ipapo kuburikidza neiyo terminal, tinozvimisa isu pedu pakero iyo CD yakaiswa uye nekuita yekumisikidza script.
Ubuntu Mate chitarisiko
Ichi chikamu ndipo pakaonekwa shanduko huru, madingindira matsva emapikicha uye kushongedzwa kwehwindo anogona kutotarisirwa mune ino vhezheni 14.10-beta2.
Ose madingindira GTK by default Ambiant-MATE uye iyo Wallpaper yakagadzirwa nematoni matema seyakanyanya kara (zvichireva kune iro kara reye yerba mate shizha) pasina kubva kumaticha ekare e Ubuntu. Iko kune kwakawanda uye kwakawanda kugoverwa neaya akasiyana mavara.
Ichi chingangove chimwe chinhu chinofanirwa kusarikwa padhesiki Gnome yemazuva ano, nyore kwekugadzirisa.
Ubuntu Mate Zvishandiso
Ubuntu Mate Iyo inouya nenhamba yakanaka yezvikumbiro, kunze kwekuwanika (zvinomisikidzwa mune angangoita ese ma distros) ini andinotaura
Mufananidzo muoni Maziso eMATE 1.8.0
Chinyorwa mupepeti Pen 1.8.1
Lectern 1.8.0 Gwaro Rekuona
Engrampa File Manager 1.8.0
Ubuntu MATE haina multimedia uye flashplugin codecs yakaiswa, sezvazviri mu Ubuntu pasuru inofanira kutorwa pasi ubuntu -kudzora-wakawedzera.
Ubuntu Mate maficha
Xorg-Server 1: 7.7
Pulseaudio 1: 4.0
Nvidia 304.123 (yazvino vhezheni)
Minimum Hardware Zvinodikanwa zveUbuntu Mate
512 megabytes (MB) ye RAM
8 gigabytes (GB) yeinowanikwa yakaoma dhisiki nzvimbo
Inotakurika DVD-ROM dhiraivha
Yekhibhodi uye mbeva (kana chimwe chinongedzo chinongedzo)
1024 x 768 kana yepamusoro resolution yekutarisa uye vhidhiyo adapta
Yakakurudzirwa Hardware Zvinodiwa
16 gigabytes (GB) yeinowanikwa yakaoma dhisiki nzvimbo
Inotakurika usb flash drive
3D vhidhiyo adapta uye yakafara creen yekutarisa ine 1366 x 768 resolution kana yepamusoro resolution
Masipika kana mahedhifoni
Iyo sisitimu yakazvibata yakatsiga, ini ndakanga ndisina matambudziko mune izvo nyaya, kunyangwe hazvo izvo SystemD yakataura zvimwe zvikanganiso mukuburitsa kweiyo dmesg yekunongedzera ku-systemd-logind, zvikasadaro zvese zvakashanda nemazvo.
Panyaya yekushandisa kunyorera uye mawindo maitiro zvaive zvisina kutsetseka sezvandaizoda, izvi zvakajairika kana uchimhanya mumuchina chaiwo neiyo MB yandakapa. Pane rakaoma dhiraivhu kuita kwacho kunofanirwa kuve kuri nani; kunyange hazvo pahurongwa hune zvidiki zvinodiwa seizvo zvakakurudzirwa, mashandiro ari mashoma.
Iwo mukana wakanaka kune avo vashandisi avo vachiri kuchengetedza kwavo kufanofungidzirwa kwe Ubuntu asi vakatama mushure mekubatanidzwa kwe kubatana. Iye zvino vane vhezheni nyowani yekusarudza kubva pakati peavo vatosimbiswa senge: Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu-gnome, Ubuntu-kylin, Ubuntustudio y Xubuntu.
Ubuntu Mate webhusaiti: https://ubuntu-mate.org/
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ongorora: Ubuntu Mate Beta 2, desktop ye nostalgic vanhu
Ini ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba ini ndashandisa mate muLinux Mint uye Ubuntu
murume mudhibian akanaka kwazvo senge archlinux
Pindura kuna sausl
Pandakaisa Debian Jessie paPC yangu muna Chivabvu wegore rino, yanga isati yave MATE.
shamwari pane debian pamwe chete ne kde ndiwo madhesiki ayo akatsiga uye ini ndakanga ndisina matambudziko
sinamoni mune mindi, uye gnome3 muDebian zvaive marwadzo padhongi
Ndiri kushandisa sinamoni pane whim asi haina kugadzikana pane yangu kuravira asi ndizvo izvo gnome 3 inofanira kuve kana kupa seimwe nzira yedesktop pc
ivo vane runako asi vanosiya zvakawanda zvekushuvira mukugadzikana kwekuravira kwangu kana imwe nyaya
Zvakanaka, kana ndikadzosera Debian Jessie, zvirinani kuti ndizviite nekuisa iyo greybird theme yeMATE kuti iite senge Cinnamon uye nekudzivirira matambudziko. : v
uye hapana repo yekumisikidza pane yakajairika ubuntu?
Pindura kuti enbudle
unogona kuwedzera mint repository uye kumisikidza apt-pinning
Kana tarisa kuti paine bvunzo yekuchengetera, ishandise uye ini handiifarire, inoshanda zvirinani kubva iyo mint repo
kana shandisa ubuntu utopic repository
Kana zviripo, asi ini ndakatozviedza uye zvikasashanda mushe, ini handikurudzire, ippa.
kuona iyo ubuntu utopic repo ini handingashandise sezvo ichishandisa systemd uye trusty haina
iyo mint repo iri nani
Ini ndinobva kune yakashomeka kuisirwa ubuntu nesinamoni (ini ndakaedzawo neumwe) inomhanya zvirinani pane kuisa mint kuti iome
kubva paminiti repo iwe unongoshandisa desktop
Iyi ndiyo nzvimbo yepamutemo yakaiswa nevashandi veUbuntu Mate kune vashandisi veUbuntu 14.04:
Ndine mubatanidzwa mumwe chete 14.04 + MATE 1.8.1 uye zvinondishandira.
Zvinonzi «Vox populi».
Pindura kune sputnik
Iko kune kumwe kugovera, kwakavakirwa paDebian Kwayedza, iyo inopa desktop Mate: Sparky Linux. Iyo zvakare ine yakawanda desktop desktop senge LXDE, e18, Vhura Bhokisi, Xfce, Razor-Qt, nezvimwe.
Ini ndinorangarira nguva dziya pandakashandisa Ubuntu 10.10, yaive yangu yeakanakisa Anoshanda Sisitimu yenguva dzese, kumhanya kwayo, kugadzirisa, pamwe neCompiz mhedzisiro yaive yekupa yakasarudzika kubata kune iyo vhezheni yacho, zvinosuruvarisa sevazhinji vanoziva, payakasvika Kubatana zvese zvakashandura madhigirii makumi matatu nemakumi matatu zvichikonzera kushanduka kwakanyanya kwenzvimbo kana OS.Ndinovimba kuti iyi vhezheni itsva inodzoreredza icho chaive chikuru Ubuntu.
Ndichazviedza, maita basa! 😀
Ndatenda chaizvo @elav, ini ndichafunga nezveshanduko;). Kurongeka kwemifananidzo kwaive kwakanaka kwazvo, ini ndichaba pfungwa yako = D
Ndedzipi ndangariro dzakanaka idzo dzinodzosa pakuona yechinyakare Gnome desktop zvakare!
Pandakachinjira kuUbuntu neshanduro 8.04 LTS ini ndakakurumidza kujaira kune ino nharaunda. Ipapo Kubatana kwakauya uye zvakandibhadharira yakati wandei; asi hei, ndimo matiri. Iyo nyaya yekuvhura kumusoro kune itsva shanduko.
Sekuziva kwangu, uye kuti mumwe munhu andigadzirise kana ndakanganisa, muMATE iwe haugone kubata iyo kara. Izvo zvinoitika kune XFCE. Ini ndinofunga ndiko kushomeka kwakakosha kusakwanisa kuratidza hunhu. Ndicho chikonzero nei ndichishandisa openSUSE KDE. Ini ndinoda gnome 2, chaizvo ndine KDE 4.14 segnome 2 ^ ^.
Iko kuongorora kwakanyatsoitwa zvekuti kwakapotsa kwaita kuti ndide kubvisa Antergos uye kushandisa Ubuntu xD zvakare ... chokwadi ndechekuti ini ndinosuwa iro desktop: ndiwo maitiro andakazoziva Ubuntu uye, nekudaro, GNU / Linux kumashure muna 2006 -2007.
Ongororo yakanaka 😀
Pindura kuna mat1986
Ndakasangana naDebian Lenny neGNOME 2. Nechekare neKusvina, yaive yave yangu yekufarira.
Uku ndiko kumwe kwekugovera uko kwavanokuita kuti uti:
Madhimoni! Ini ndaifanirwa kunge ndakaisa Ubuntu MATE pane Debian.
Zvakanaka, tenda kunaka Debian Jessie ndichave naMATE.
Ini ndinorangarirawo Gnome2… inguva yakadii !!!!!!
Kunze kwekuda kuziva ini ndakaisa Ubuntu-Mate palaptop (3gbram, 1,65GHz x2), kuyedza distros muVirtualBox hakukodzeri kwandiri, zvinoita sekunge vanokutendera kuti uedze mota, asi iwe enda pachigaro chevatakuri, kunyange ini ndinonzwisisa kuti zvinodikanwa kana iwe usina zvimwe zvekushandisa.
Ini ndakanga ndisina dambudziko neiyi beta, kuisirwa kwakakodzera, kunwiwa zvisina kujairika kwegondohwe, Bhokisi uye kunyorera kuvhurika nekukurumidza, 100% inogadziriswa,. inobudirira kwazvo desktop madesktop.
Usasiye ichiiswa nekuda kwezvikonzero zvitatu. Chekutanga ndechekuti beta, chechipiri kuti haisi LTS vhezheni uye chechitatu ndechekuti ini ndatojaira kana kuchinjika neGnome Shell. Pakasvika Kubatana akandizivisa zvakawanda nezve KDE (yakanaka kwazvo desktop) asi pakupedzisira ndakadzokera kuGnome mushanduro 3. Yakanaka info, ndatenda.
Asi, zvakafanana nekubvumidzwa kuyedza mota mune simulator
Pindura kuna joakoej
Zvakafanana nekuona kuvira kwezuva paTV
Ichokwadi ndechekuti nekunonoka kukura kweXfce nguva dzese Mate paanondikanda zvakanyanya. Ini, sevazhinji, ndaivewo mushandisi weGnome 2 uye ndakawana kwandaipotera muXfce.
Ndiri kufunga kutsiva Xubuntu neLinux Mint 17 ine Mate. Kunyangwe yakavakirwa paUbuntu zvakare inotaridzika zvakanaka kwazvo. Zvakaipa haisi LTS.
Mint 17 ndeye LTS sezvo yakavakirwa paUbuntu 14.04 LTS.
Ongororo yakanaka kwazvo! Yakasiya kuravira kwakanaka kwazvo mumuromo mangu maererano neMATE. Asi ini ndaizokurumidza kuchinja iwo maorenji emifananidzo iwo akafanana mune green: 3. Kunze kweizvozvo, chero nguva ini ndinoisa MATE pane yangu Ubuntu muchina
Nongedzo linux-mate-yakazara 3; Ndakaiisa uye zvinoshamisa. WeDebian wepamusoro-soro-kunze uko uye anoshanda zvakakwana ndinoikurudzira. Sludos
Pindura kuna Ator2
Ivo vanogona kuita ongororo ye deepin2014.1, izvi zvinoshamisa ... kunyangwe ndichiiona ichishata kupfuura 2013, zvinonyanya "mushandisi" humbowo, zvakangodzvanywa.
Zvakanaka, nezuro chaiye, ndakafunga kumisikidza Ubuntu Mate uye zvakandishamisa, sezvo ndiri mudiki kupfuura ubuntero, ndanga ndichishamisika nemabatiro azvinoita, zvekuti ndinofunga ndichagara nayo kwenguva yakareba . Pasina mubvunzo kutaura, zvinokufadza iwe kuona iro rimwe tafura rawaona pawakatanga pane ino makore mana apfuura (mune yangu).
Ini ndinoda ElementaryOS zvakanyanya neayo Phanteon, inoyevedza. Ndisati ndanyatsofarira Gnome pani asi ini handidi kudzokera kumashure munguva ...
Ini handidi kuenda kumberi nenguva, zvinongotiunza padhuze nekutsakatika ... Zviwanikwa zvepanyika zviri kupera, Zuva riri kupera ...
Iyo yekumadokero capitalist uzivi hwekuti nyowani iri nani haina kukodzera ini kana, izvo zvinoshanda kwazvo kune avo vane chimwe chinhu kunze kwechigadzirwa kuti vatengese uye huwandu nemari inokwana chete yekutenga. Kana iyo yekare yatondishandira uye ichishanda zvirinani, nei ini ndichida iyo nyowani? Ndiine nyowani ini handingakwanise kuita zvinopfuura kutora nhanho kumashure, ona iyo Gnome 3 kesi.
Dzimwe nguva unofanirwa kudzokera kumashure kuti ukwanise kuenda kumberi ...
Ndine urombo ne psudo yekutsika murazvo wandakaita.
offtopic: urikuenda kuongorora gnome 3.14?
Iwe unoreva izvi? https://blog.desdelinux.net/gnome-3-14-analisis/
Pane chero munhu angandiudze kuti zvinoita sei? Zvinokurudzirwa here nezvikwata zvine makore mashoma zera? Zviri nani kupfuura Xubuntu kana Lubuntu?
Kwaziso kune vose
Ini ndinofunga yakafanana neXubuntu, asi zvirinani kutaurwa nemumwe munhu anonyanya kushandisa kuyedza zviwanikwa.
Ndakaedza zvese zviri zviviri, iyo yekushandisa sosi yakafanana, asi iyo Xfce inoshandisa zvishoma. Zvisinei, ini ndinosarudza Mate nekuti iri nani kusanganiswa, ine zviputi zvishoma uye zvimwe zvingasarudzwa nezvinhu.
Yakanga yave nguva.
Chinhu chekutanga chandakaita ndichiisa kugovera, uye nekuona kuti ndine zvikamu zvishanu zveshanu linux dzakasiyana, yaive yekuisa MATE. Izvo zvinongoshanda zvakanaka, neGnome 5 chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri sekune KDE 5, yakanaka kwazvo, chaizvo chachi, asi ini ndinorasika. Chimwe nechimwe zvachiri.
Dambudziko chete randave naro neMate-Ubuntu ndere madhiraivha matsva, komputa yangu yakarembera. Ini ndaifanirwa kuvabvisa uye nekuisa iwo anobva kuNvidia, ikozvino inoshanda zvakakwana.
Chimwe chinhu chandakarasikirwa nacho, mushure mekuisa iwo matsvagari ari 200Mg, ini ndinofunga inofanirwa kunge ichigadziriswa zvishoma, ini handizive ...
Pindura ku seta43
Ini ndaive mushandisi weGNOME kudzamara kwaburitswa vhezheni yayo nyowani iyo kusvikira nhasi, handizvifarire. Ini ndakasarudza kushandisa KDE uye ndinogutsikana kwazvo nemabatiro acho.
Handina zvakawanda zvekutaura nezve MATE, iri GNOME 2 uye kuishandisa zvinoita sekutora nhanho kumashure. Kana ndikamboiisa pakombuta yangu zvinongova zvekundiyeuchidza nezvenguva dzekare uye ndinogona kurega kuishandisa mushure memaawa mashoma.
Asi hei, ndiyo nzira yangu yekutarisa mamiriro acho ezvinhu. Ini handisi kuzozviisa pachinzvimbo chekuudza vanhu zvekushandisa, mumwe nemumwe anosarudza zvinokodzera munhu wake.
Ndanga ndiine Mint Mate kwechinguva, izvozvi ndine gumi nemanomwe, uye iri kuenda sezvazvinofanira, sepfuti.
Mune Laptop ine 4gb yegondohwe uye wepakati musimboti kubva muna2008 inoshanda zvakanyanya, pakuita zvisina basa inongokumbira 200-220 megabytes egondohwe.
Uye kushanda neknnome2 / mate komputa yakanaka, menyu yakatsvinda, shoma gondohwe rinoshandiswa, inogadziriswa uye yakashongedzwa zvakanaka. Iine synapse Launcher hapana desktop inouya padhuze.
Pindura kune apple3
Ini ndinobvisa zvandakataura kuti ndichagara muUbuntu Mate kwechinguva, ndadzoka kuDebian.
Iwe unotora download Jessie's yazvino Netinst, beta 2, uye kana iwe uchisvika padanho rekusarudza desktop unosarudza Mate uye unosvika kune imwechete poindi neUbuntu Mate, asi naDebian, iri kukurumidza sezvazviri.
Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, iyo murrine package inoiswa nekukasira, ndiko kuti, iwe unoisa iyo Greybird nekamwe chete, iyo faenza mifananidzo inouyawo nekumisikidza. Muchidimbu, 4 kudzvanya uye iwe unosiya Debian neMate uchitaridzika zvakanaka.
Ini ndinofungidzira kuti havagone kushandisa iyo Ubuntu theme yezvinyorwa copyright nezvimwe XD
Ehe, iwe unogona kuisa iyo Ambiant theme yeUbuntu, hapana dambudziko. Iyo nyaya yekuzvirodha pasi.
hupenyu hwakareba kuroora 🙂
Ndiri kutoda kuti chigadzikane chi icho chi chibude 🙂
Haisi dhesiki revanhu vasina hanya, asi razvino, kune wese munhu anoda kushanda zvakanaka, uye pasina matambudziko e'kubatana ', pakati pevamwe.
Luis Felix akadaro
Yakanaka kwazvo iyi blog ndinokukorokotedza iwe.
Pindura kuna Luis Felix
Ndanga ndichishandisa ubuntu mate kwemakore uye zviri kufamba zvakanaka ne2GB yegondohwe uye 320GB yehard disk, chokwadi ndechekuti ndiri kufara neiyo yakasarudzika ba mukuti chokwadi ndechekuti windows 10 yakanaka pane imwechete pc, ini ndiri kugara nebuntu mate
Jigdo: Gadzira kana Dhawunirodha Debian Isos nekukurumidza
Maitiro ekuisa mafonti muGNU / Linux